Olee otú mgbasa ozi na-esi gbasaa akụkọ ha iji nyochaa nyocha ma nọgide na-atụgharị akụkọ ha na nkwenye (Jos Brech): Martin Vrijland
Olee otú mgbasa ozi na-esi kọwaa akụkọ ha na nyocha nyocha ma nọgide na-atụgharị akụkọ ha n'echeghị echiche (Jos Brech)
gbara akwụkwọ Gbanwee NICKY, OZI OZI	by Martin Vrijland	na 24 September 2018	• 3 Comments
O juru m anya na m na-eleghachi Pauw anya, bụ onye ọkàiwu Jos Brech, Gerald Roethof, nụchara akụkọ ya n'ụzọ ziri ezi. ihe ederede na m bipụtara otu ụbọchị tupu mgbasa ozi ahụ. Ọ bụ ihe dị egwu na e nwere mberede abụọ nchara ọhụrụ na tebụl. Ọhụụ ọhụrụ ndị mmadụ ga-emesị mechie. Na mberede, DNA nke Jos Brech na ndị nicky Verstappen ga-achọpụta ma na mberede, ụmụaka ga-enwe porn na PC ya.
Ngosipụta nke ọgụ beak n'etiti Gerald Roethof na Peter R. de Vries bụ n'elu ihe ngosi niile bụ akụkụ nke igwu egwu ndị mmadụ. Roethof arụ ọrụ ọkàiwu dị nkatọ nke na-ekweghị ka Peter R. de Vries mee ihe ọ bụla, mana ka ọ dị ugbu a, ọ na-ekere òkè na iduzi onyinyo onye na-ekiri. Roethof na-eme ka nnyeme dị ka ime dị ka ihe dị oke egwu banyere ọnụ ọgụgụ ụmụaka na-ese foto na-achọpụta otú o si malite na PC. O jikwa okwu gbasara ọnụọgụ nchọpụta DNA nke ndị ọzọ, ma o yikwara ka ọ ga-enwe ike tinye Peter R. de Vries akwụkwọ. Ihe o mere ọ bụghị ime ihe dị mkpa karị! Ihe Roethof anaghị eme bụ otu ike ọkachamara rịọ maka ihe ndị DNA chere na ọ bụ ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ ụmụaka.
Roethof si otú a na-arụ ọkàiwu dị nkatọ nke na-arụrịta ụka na De Vries, ma na-ahapụ ya ka ọ na-efu na ezigbo nchebe bara uru. Ọ bụrụ Nicky Verstappen abụrụ onye a na-emegbu ma gbuo, ọ ga-adị mma na achọtara ya mgbe afọ 20 gasịrị. Ma, ajụjụ a bụ ma ànyị na-emeso PsyOp (Psychological Surgery) ịmebata iwu ọhụrụ (dịka ọmụmaatụ DNA, dịka ọmụmaatụ). Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ikpe ahụ, onye ga-agbanye ikpe a ọzọ ma mee ka ịchọọ ọkàiwu PsyOp site n'aka onye na -onye omee onye na-egwuri egwu) emeghi kwa nyocha nke onwe. Mgbe ahụ, ịchọrọ ịchọrọ nke abụọ n'ụdị mgbochi ọkachamara; mgbe ahụ, ọrụ gị bụ iji nọgide na-enye akụkọ ahụ n'aka, site n'ịgafe ma na-awakpo Pita R. de Vries na TV. Na ime nke a, ị na - enweta ndị na-agụ akwụkwọ Martin Vrijland dị oke egwu na onye ọ bụla ka na - ejikwa aka ya mara Pauw.
Ana m adaghachi ugboro ugboro, mana ihe niile na-egosi na nke a bụ PsyOp, ugbu a, na DNA nọ na uwe ime uwe Nicky Verstappen. Peter R. de Vries na-agbagha ụgha ụgha, ya bụ, ahụ nke Nicky Verstappen na mberede na ngọngọ dị otú ahụ ga-abụ na ọ bụ ntakịrị ihe a ga-esi na-ebute ya na autopsy. Nke ahụ bụ ụgha kachasị njọ ị nwere ike ịkwado na tube, mana Peter R. de Vries nwere aka n'efu na Gerald Roethof adịghị n'ebe ahụ iji kpughee ụgha nke Peter R. de Vries. Roethof bụ nanị ma na-eme ka à ga-asị na ọ dị oke egwu. Ọ bụ banyere nghọta gị; echiche nke onye na-ekiri ya.
Ọ dịtụghị mgbe e e doo anya na DNA na ogologo ọkpa, e nweghị mgbe hụrụ nwa-akpali agụụ mmekọahụ na dịghị mgbe pụtara ikpe nke igbu ọchụ, mmadụ ma ọ bụ n'ụzọ mmekọahụ. Ọ bụ ihe na-abụghị ihe. Na njide e akp na 90 ụbọchị, si a nditịm iwu ya mere na-ezighị ezi na ga naanị 1 mgbaru ọsọ: Ị chere na a ga-emechi, ọnọdụ gị ụbụrụ onye nkiri. Banyere ụbọchị 90 ị na-arụsi ọrụ ike na ihe ndị ọzọ, dịka ezumike ski gị ma ọ bụ mkparịta ụka black-peep. Ihe omume nke werewooro ọnọdụ "Anyị nwere onye na-ajụ ịsị ihe, ma achọpụtala DNA na akwa iko na ụmụaka na-ese foto na PC ya, n'ihi ya, ọ bụ onye na-eme ya". A ga-etinye ikpe ahụ maka ngwaahịa 90. N'ihi na akụkọ dị na mgbasa ozi na-anọgide na-eme mgbanwe maka ihe m dere banyere nke a, anaghị m eme amụma ọ bụla.
The obodo chọrọ ihe ọzọ karịa DNA nke onye ọ bụla na a nnukwu mba database, otú ị ga-kenyere site PSYOP ikpe ebe DNA bụ bụrụkwa. Ọdịdị ahụ bụ na nke a na-edozi mpụ. Ị maara nke transhumanist plan kwupụta a aka ike uwe ojii obodo ebe onye ọ bụla na-metụtara ụbụrụ na physiology nke Internet, ọ bụ ihe nketa nke DNA nke ọ bụla nnọọ uru. Ọchịchị na-eduzi na-okwu burukwa site ugbu a iji niile iwu na-abịa site na 'Nsogbu, Ngwọta, Ngwọta'iji hụ na ị kwadoro ya.
A na-egosi telivishọn iji zipu echiche gị. Mkparịta ụka dị mkparịta ụka ma ọ bụ mkparịta ụka nkịtị na-eme ka ị dọpụ uche gị na ajụjụ ndị dị mkpa na ịtụkwasị obi. A duhiere gị.
GỤRỤ AKWỤKWỌ NDỤ AHỤ HERE
Ihe akaebe na Gerald Roethof dị ka onye ọka iwu PsyOp na Jos Brech
The Jos Brech: "Mkpesa ikpe" naanị mgbe okpomọkụ 2019
Ngwunye nke ọzọ na Nicky Verstappen - Jos Brech psyop? Ụmụaka ndị na-akpali agụụ mmekọahụ hụrụ!
Nicky Verstappen Jos Brech bụ maka ịnabata nchekwa data DNA maka iso DNA gị nwee mmekọrịta n'ịntanetị
Ihe ọma nke data DNA mba ahụ na mgbakwunye na ịmebi ikpe ikpe ọnwụ
Tags: Brech, agba, Gerald roethof, Jos, Nicky Verstappen, Ebube, Peter R. de Vries
Wilfred Bakker dere, sị:
24 September 2018 na 11: 25
Agụwo m Martin a nile, vidio m esiteghị karịa 2 nkeji.
Mara na ị na-egosi m gburugburu ebe obibi anyị.
Ize Ndụ nke Ileghara Ala Gị Anya
24 September 2018 na 11: 59
E nwekwara ozi ọma m na-ahụ dị ka, geenstijl ibu onwe ha, ị nwere ike-abụ onye so na ịzụta a pink okpueze Beatrix, nke ahụ bụ oké ozi ọma Otú ọ dị, na a puku ole na ole reaguurders (nke m na-eme na-amasị) a aghụghọ ọnyà ịda ada dị nnọọ mwute, ezigbo mwute.
Enweghi ike ighota odidi nke odighi uzo bu ebe gbara ocha, ebe ndi mmadu dika mu na gi na ejide ma oburu na anyi amaghi.
Ana m etinye ụfọdụ ọchị n'ebe a, na-enweghị ọchị na anyị enweghị ebe ọ bụla.
broom dere, sị:
24 September 2018 na 15: 38
Ọ bụrụ na e nwere ntinye data DNA mba, ha ekwesịghị ịchọpụta ma nne na nna Peter R de Vries bụ ụmụaka. Nke ahụ nwere ike ịhụ onye kpuru ìsì. Na-ekwu banyere ọchị.
" Ngwunye nke ọzọ na Nicky Verstappen - Jos Brech psyop? Ụmụaka ndị na-akpali agụụ mmekọahụ hụrụ!
Echiche nkwenye nke hacked »
Nleta nile: 14.658.532
Onye na-ahụ maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-atụ aro ka e wuo ụlọ mkpọrọ agụgharị!
Nrụgide a na-enye ụmụaka dị ukwuu!
Na steeti ndị uwe ojii, ịchọrọ iwu machibido ndị uwe ojii na-eweta vidiyo na ndị na-enye aka
Mara akụkọ ihe mere eme iji ghọta usoro UN XX XX
Teknụzụ Smart na ọchịchị ụwa zuru ụwa ọnụ ga-echekwa ihu igwe
2 igwefoto op Nrụgide a na-enye ụmụaka dị ukwuu!
Martin Vrijland op Onye na-ahụ maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-atụ aro ka e wuo ụlọ mkpọrọ agụgharị!
guppy op Onye na-ahụ maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-atụ aro ka e wuo ụlọ mkpọrọ agụgharị!
Mmiri op Onye na-ahụ maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-atụ aro ka e wuo ụlọ mkpọrọ agụgharị!
© 2019 Martin Vrijland. Ikike niile echekwara. Okwu site na Solostream.